၆၃ ရက် NoFap - Your Brain On Porn ပြီးနောက် DE ၁၇ နှစ်ကိုဘယ်လိုရိုက်ခဲ့လဲ
အဘယ်သို့ငါ NoFap ၏ 17 ရက်အကြာမှာ DE ၏ 63 နှစ်ပေါင်းရိုက်နှက်
အဲဒီမှာကဒီမှာအပေါ်အများကြီးကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များခဲ့ငါပယ်ရှင်းသမျှသောသင်တို့၌နဲ့ငါ့ဇာတ်လမ်းမျှဝေဖို့အကောင့်တစ်ဦးပစ်ဖန်တီးမယ်လို့ထင်ပါပွီ။ ငါမလူတိုင်းအစား ED ၏ DE, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ရှိပြီးနားလည်ပါသည်။ ငါအများကြီးဆက်စပ်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များရှိနေကြသည်မဟုတ်အဖြစ် DE သူကလူတချို့မျှော်လင့်ချက်ဆောင်ကြဉ်းမယ်လို့ထင်ကြတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ခံထားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကရိုးရိုးလေးမဂ္ဂဇင်းများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်အခြားရုပ်ပုံများနဲ့အတူဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ အခုအသက် ၂၀ ကျော်ပြီ။ ငါ DE အမြဲတမ်းရှိခဲ့ဖူးပြီး O. ကြီးကိုမထိခဲ့ဖူးပါ။ ဦး နှောက်သည်သက်ရှိသတ္တဝါအားညစ်ညမ်းမှုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အဘယ်သို့စုပ်ယူသည်ဟူသောဤဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ငါဘာမှားနေမှန်းမသိခဲ့ဘူး၊ ငါနofapနှင့် yourbrainonporn ကိုမတွေ့မချင်းအကူအညီရှာရန်ကြောက်ခဲ့သည်။
ဒါတွေအားလုံးကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးသစ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးခြင်းမရှိသောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ DE ပြissueနာကိုမသိခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့အဘယ်သူမျှမ fap မရှိခဲ့ကြောင်းသူမ၏ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်သူမကရယ်မောခဲ့ပြီးနောက်သူမစိတ်ကူးကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ငါသူမကို ၃.၅ လမှာတွေ့ရမယ်။ ဒါကရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်။ ဒါနဲ့ 3.5 ကြီးကိုသွားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်!
၆၃ ရက်ကုန်သွားပြီ။ ငါအရမ်းတင်းမာနေပြီးတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ MO လုပ်ခဲ့တယ်၊ P မရှိဘူး၊ ဒါကသိပ်မကြာဘူး။ ငါ lube ကိုသုံးပြီးငါ့ရဲ့လေဖြတ်ပုံကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့နှေးမှုအဖြစ်ပြောင်းခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်မရဲ့ ၆၃ ရက်အမှတ်အသားပါ။ ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်ကထဲက shit လူရှုပ်ထက်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
PE နှင့်လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ကျွန်ုပ်စပ်ကြားခေါင်းစဉ်မှာပေါ်လာခဲ့သည်။ သူမအပျော်ခရီး ၂ မိနစ်ကိုသူမစိတ်မဝင်စားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းသက်သာအောင်လုပ်ဖို့လိုသည်။ ဒါနဲ့ ၆၃ ရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ငါ MO'd နဲ့ PMO ကိုရက် ၄၀ အကွာအဝေးမှာ ၇ ကြိမ်တွေ့ရတယ်။
ကြီးမားတဲ့နေ့ရောက်လာပြီးငါတို့အတူတူရှိခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မတိုင်ခင် ၅ ရက်လောက်အလိုမရှိခဲ့ဘူး ကြိုတင်လောင်းကစားခြင်းမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာခဲ့သည်။ ငါစိတ်အေးအေးထားဖို့နဲ့စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်မမှာလိင်စိတ်နည်းတာမရှိဘူး။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ၅ မိနစ်လောက်မှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အတော်လေးတိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာမီးရှူးမီးပန်းတွေထွက်နေပြီ။ ငါနောက်ဆုံး ED ကိုရိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လုပ်တာပါ! ရပ်ကွက်အပေါ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိင်ပိုကောင်းလာတယ်။ ငါလုံလုံလောက်လောက်တိုးတက်လာပြီးငါ O. လိုချင်တဲ့အချိန်မှာငါထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ။ တစ်ခုမှာ ၂ နာရီမပြည့်ခင်မှာ ၂.၅ နာရီကြာ၊ လိင်ကိစ္စမလုပ်ခဲ့ဘူး။
ငါ၏အ fapstronauts ထွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်သည်ကွဲပြားခြားနားပြီးကျွန်ုပ်သည် ၆၃ ရက်ဖြင့်သတ္တုတွင်းကိုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ နောက်ပြီး PMO တော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ကိုတောင်မမက်ချင်တော့ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာတယ်။
ဤသည် subreddit နှင့် youbrainonporn တိုက်ခိုက်ရေး DE ငါ့ကိုကူညီပေးဖို့ငါ့ကိုအကြီးရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။
TLDR; 63 နေ့ရက်ကာလ၌ nofap ရိုက်နှက်, ယခုမှသာအသေခံချုပ်ကိုင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ lube နှင့်အတူ FAP မပိုတဏှာ P ကိုသုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
LINK - အဘယ်သို့ငါ NoFap ၏ 17 ရက်အကြာမှာ DE ၏ 63 နှစ်ပေါင်းရိုက်နှက်